Arsenal oo ku guulaysatay koobka FA-ga - BBC News Somali
Arsenal oo ku guulaysatay koobka FA-ga
31 Maajo 2015
Image caption Kabtanka kooxda Arsenal, Per Mertesacker, oo kor u qaadayo koobka FA-ga ee ay kooxdu ku guulaystay.
Arsenal ayaa dib u hanatay koobka FA-ga kaddib markii ay 4-0 ku xaaqday kooxda Aston Villa, sidasina ay ku noqotay kooxda ugu koob qaadka badan ee taariikhda koobka FA-ga.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Wembley ayaa kooxda lagu naaneyso Gunners waxa ay bilowgii ciyaartaba u muuqatay in ay guul weyn gaari doonto.
Arsenal ayaa maamulaysay inta badan ciyaarta iyadoo qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay hal gool oo kaliya, goolkaasi oo uu si qurxoon u dhaliyay ciyaaryahankooda Theo Walcott.
Alexis Sanchez, ayaa markii la isugu soo laabtay ciyaarta waxa uu ugu labeeyay kooxdiisa gool lagu tiriyay inuu ka mid yahay goolashii ugu qurxoonaa ee laga dhaliyo ciyaar kama dambeys ah ee koobka FA-ga.
Aston Villa ayaanan soo bandhigin ciyaartii nus dhammaadka koobkan ay kala hortagtay ee ay kaga adkaatay kooxda Liverpool.
Arsenal ayaa ka faa’iidaysatay qaabka wanaagsan ee ay u dheelaysay oo difaacooda Per Mertesacker ayaa goolkii saddexaad shabaqa cuksiiyay.
Daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaartana ciyaaryahan Olivier Giroud, oo badal ku soo galay ayaa goolkii khatinka ee afraad u dhaliyay kooxdiisa, halkaasna si xarago leh koobkii ugu guulaysatay.
Koobkan ayuu Arsenal u yahay midkii 12-aad ee FA-ga Ingiriiska, halka ay kaalinta saddexaad ka gashay horyaalka Ingiriiska ee xagaagan, taasoo u xaqiijisay in ay si toos ah uga qeyb galayso Horyaalada Yurub.